Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Australia eziQhekezayo » Ihotele evalelwe yedwa ye-COVID-19 yatshiswa eOstreliya
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Amapolisa abambe owasetyhini oneminyaka engama-31 ubudala, ekuxelwe ukuba ulayite umlilo phantsi kwebhedi yakhe, watshisa ihotele apho yena nabantwana bakhe ababini bayalelwa ukuba bahlaliswe bodwa kangangeentsuku ezilishumi elinesine.
Umlilo omkhulu ugqume umgangatho ophezulu wehotele yasePacific kwisixeko saseCairns kumntla-mpuma Ostreliya, kunyanzeliswe ukufuduswa kweendwendwe zehotele ezingaphezu kwe-160.
Eli bhinqa libekwe ityala lokutshisa ngu Queensland autorités.
Akukho mntu wonzakeleyo, kodwa umonakalo kwisakhiwo 'ubalulekile' kwaye kwanyanzeleka abasemagunyeni ukuba bafudusele abantu kwezinye iindawo zokuvalelwa kwi-COVID-19.
Abasemagunyeni bathi owasetyhini ubase umlilo emva kokuchitha "iintsuku nje ezimbalwa" zokuvalelwa iiveki ezimbini ngaphakathi ehotele emva kokuwela eQueensland evela kwelinye ilizwe.
Phambi kwesehlo, uxelelwe ukuba ubangele ezinye iingxaki ezingachazwanga kubasebenzi ngexesha lokuhlala kwakhe.
Abantwana bakhe ababini bathathwe phantsi kokhuseleko lwamapolisa, logama owasetyhini yena ebekwe ityala lokutshisa nokonakalisa ngabom, kwaye kulindeleke ukuba avele enkundleni namhlanje.
Ngexesha lobhubhani we-COVID-19, Ostreliya irekhode malunga nokusweleka okumalunga nama-2,000 njengoko ibhenela kwezinye zezona ndlela zinzima emhlabeni zokuvala indawo kunye namanyathelo okuvalelwa yedwa, engachaphazeli nje kuphela amazwe angaphandle kodwa nokuhamba kwamazwe ngamazwe, kwilinge lokugcina usulelo lusezantsi kangangoko de uninzi lwabantu lugonywe.
Kanye njengokuba ilizwe lalilungiselela ukuvula kwakhona imida yalo kubafuduki abanezakhono kunye nabafundi nge-1 kaDisemba, iimeko zokuqala zokwahluka kwe-Omicron coronavirus entsha zabhaqwa kubahambi abavela kumazantsi e-Afrika, ezinokusiphazamisa isicwangciso.